साहित्य Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by दीपशिखा घिमिरे October 24, 2020
‘राजु दाइ, आइदिनुस् न है’ भन्दा हुन्छ भनेर आइदिने राजु दाइले ‘लेख बहिनी’ भनेपछि म कसरी पो नलेखौँ ? फेरि नेपालीमा नलेखेको पनि धेरै भइसकको थियो । त्यो भन्दैमा फेरि अंग्रेजीमा चाहिँ लेखेर तहल्कै पिटेँ भन्न खोजेकी होइन । दाइले सन्दर्भ पनि जुराइदिनु भयो- दशैं । अब ‘नाइँ लेख्दिनँ’ भन्न पनि मिलेन । ल, अब खुरुक्क बसेर लेख्छु भनी हातमा कापी र कलम बोकेँ । फेरि यो लेख्ने भन्ने कुरा चिटिक्क परेको बस्ने ठाउँ, गतिलो कापी, कलम, समय, अनुसन्धानको लागि चाहिने किताबहरू, गुगल मात्र भएर मात्र पनि नआउने के । ओहो, फेरि मैले तपाईंलाई अल्मलाएँ, म त दशैंको बारेमा पो लेख्न बसेको ।
सात महिना पूरा भइसक्यो घरबाट बाहिर ननिस्किएको, न त नयाँ लुगा किनेको छु । छुट्टी हो जस्तो लाग्थ्यो दशैं अहिले त जहिल्यै छुट्टी । न झिलीमिली, न दशैंसँगै आउने सांस्कृतिक कार्यक्रम । भीडको नाममा ‘कोभिड’ मात्र सुन्छु । ह्या, यस्तो बेलामा पनि राजु दाइले के दशैंको बारेमा लेख्नु भनेको होला । यदि दशैं धेरैपछि सबै काम छाडेर सबैजना घरभित्र बसेर मनाउने चाड हो भनौँ भने कोभिडको त्रास एकातिर, अर्कोतिर सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले घर गोठ सबै बगाएकाले के गरी दशैं मनाउलान् ?
हुन त स्कुले जीवनदेखि दशैंको निबन्ध आउने बित्तिकै मैले लेख्ने एउटा परिभाषा थियो । त्यही लेखेर पो सुरु गरूँ जस्तो लाग्यो ! चैत्र शुक्लपक्षमा मनाइने दशैं र आश्विन शुक्लपक्षमा मनाइने दशैं गरी वर्षमा दुई दशैं पर्दछन् । तर आजभोलि दशैं भन्ने शब्द आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमी र त्पयसछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पन्ध्र दिन धुमधामले मनाइने चाडलाई नै भनिएको बुझिन्छ । ती पन्ध्र दिन मध्ये पनि विशेष महत्वपुर्ण दिन चाहि सप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी र दशमी तिथीका दिनहरू हुन् । अब चैते दशैं र विजयादशमी छुटाउने उपाय एउटा के हो भन्दा चैते दशैंमा एकदिन बिदा हुन्छ र विजयादशमीमा बिस दिन, कहिलेकाहीँ स्कुल एक महिना तिहारसम्म पनि हुन्छ ।
उफ् ! के लेखेको मैले ? हुदाँहुँदा कस्तो परिस्थीती आयो, मेरो त दशैं बिदाभन्दा चैते दशैं बिदा पो धेरै हुन गयो जस्तो छ । चैतदेखि बिदै बिदा छ । हरे ! राजु दाइको आग्रहमा लेख्न लागेको यो लेखमा मेरो दशैंको पुरानो परिभाषाले पनि काम नर्गला जस्तो छ ।
ठिकै छ दीपशिखा, तैँले हार खानु हुँदैन, लेख्ने प्रयास जारी राख्नु पर्छ ।
“वर्षा, जाँगरिली, दासी, धोई, पोती, लिपी, चली ।
शरद् मालिक्नी जस्तै गर्न थाली ढलीमलि !”
भनी कविशिरोमणि लेखनाथ पोड्यालले शरद् ऋतुलाई मालिक्नीको उपमा दिएका छन् । साच्चै यसबेला आकाश खुल्ला, स्वच्छ देखिन्छ । प्रकृतिमा नयाँ बैंस, नयाँ उमंग/बहार आएको हुन्छ । यसरी जाडो र गर्मी दुवै समान अवस्थामा रहने शरद ऋतुमा नेपालीहरूले सबै मर्मत गर्छन् । सफासुघर गर्छन् र सकेसम्म रमाइलो गरी मिठो परिकार खाएर यो चाड मनाउँछन् । ओहो ! यो लेखेको मिलेन जस्तो छ, यसरी हरेक टोलमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको अवस्था छ । धेरै आफन्त कोही आइसोलेशनमा, कोही क्वारेन्टिनमा त कोही आइसीयूमा । हैन यस्तो अवस्थामा मैले भनेजस्तै दशैं रमाइलो छ र ? यस्तो जटिल परिस्थितिमा मनमा शान्ति कहाँ हुन्छ र । बरू स्तब्धता छाउनेरहेछ । प्रकृति रमाए पनि मन सधैँ नरमाउँदो रहेछ ।
दशैंसँग सम्बिधित धेरै किवदन्ती छन् जसमध्ये, यो पर्व अन्यायको विरुद्ध न्याय र असत्यको विरुद्ध सत्यको विजय भएको खुसियालीमा मनाउँदै आएको देखिन्छ । यो लेख्दै गर्दा घटनाहरू सम्झिए अनि ती अनुहारहरू ! सम्झना कामी, र्निमला पन्त, संगिता मण्डलजस्ता नामहरूले न्याय पाए त ? ‘दाइले मेरो खुट्टा ढोग्छ, बाबाले पैसा दिनुहुन्छ’ भनेर खुशी हुँदै दशैं मनाउनु कि कसै न कसैको दाइ, बाबाबाट नै बलात्कृत भएका यी मैजस्ता चेलीहरूले हारे, मैले हारेँ वा सत्यले हार्यो भन्ने जान्दाजान्दै म कसरी दशैं मनाऊँ ?
एक किवदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा दैत्यहरूको आतंंकबाट आतंकित भएका देवताहरूले शक्तिरुपनी दुर्गा भवानीको आरधाना गरे अनि दुर्गा भवानी प्रकट भइन् र देव/मनुष्यहरूलाई सताउने शुम्भ, निशुम्भ र रत्तबीज, महिषाशुर आदि असुरहरूको विनाश गरी उनले असत्यलाई पराजित गरिन् र सत्यको संरक्षण गरिन् अनि देवताहरूले निर्भय भई देवीको पूजा गरेदेखि नै यो पर्व मनाउने प्रचलन आएको रे ।
यसो सोचौँ त यो कोरोना अनि बलात्कारी मानसिकता, यी कुनै राक्षस भन्दा कम छन र, छैनन् नि है ? कोरोनाको कुरा गर्दा, ठिकै छ बरु अर्को साल मात्र हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न जाऔँला । तर यो बलात्कारी मानसिकतासँग ? यससँगको लडाइँ महिषाशुरसँगको लडाइँभन्दा कहाँ कम छ र ? यो लडाइँ सभ्यताको मस्तिष्कमा लागेको खियासँगको हो । जसको आज या भोलिमा नतिजा अपेक्षा गर्न मुस्किल छ । तर, यसकै सिकार भई अन्यायमा परेका ती चेलीहरूमाथि न्याय होस्, जो सरकार र सत्ताधारीले चाहने हो भने अविलम्ब सम्भव छ ।
यत्तिका समस्याहरूबिच गुज्रिरहँदा हरेस खाइदिन मन लाग्छ । तर जब फेरि दुर्गा भवानीबारे उही किंवदन्ती सम्झिन्छु एक किसिमको मनमा अठोट बनेर आउँछ । ऊर्जा बनेर आउँछ । राक्षसलाई परास्त गर्नु एउटा कुरा तर विद्रोह गरिरहनु, जुधिरहनु अर्को कुरा । सबैलाई यसपालीको दशैंमा दुर्गा भवानीले यही राक्षष र राक्षसी प्रवृत्तिमाथि अथक विद्रोह गर्नसक्ने ताकत दिऊन् । हामी जहाँ जहाँ छौँ, त्यहीँबाट मानवीय सौहार्दतालाई आदर्शमा मात्रै होइन व्यवहारमा लागु गरौँ र राक्षसी प्रवृत्तिलाई देखावटी रूपमा मात्रै होइन हाम्रो भित्रैबाट निकालेर मिल्क्याइदिऔँ । सबैमा दशैंको शुभकामना ।
by श्रेया अर्याल October 24, 2020
by कल्पना जोशी October 23, 2020
नेपाली कागजअनुवाद कविताकविताफिचर
by मोहित जोशी October 22, 2020
by गंगाराम गौतम October 21, 2020
by डि जि शर्मा October 21, 2020
by कवि भूपिन October 20, 2020
by काव्यालय October 19, 2020